Option ကိုသြစတြီးယား | ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးဖို့
တရားမျှတသောဖက်ရှင် - ဝတ်ဖြစ်ရပ်မှန်များ
Chesa Valisa: ဇီဝအတွက်ရှေ့ဆောင်
DreckSpotz App ကို
အောက်ရေစီး - သြစတြီးယားအတွက်လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲမှု၏အခြေအနေပေါ်
အဘယ်အရာကိုစူပါစားနပ်ရိက္ခာ & ဖြည့်?
ဓာတုဗေဒ - နေမကောင်းဆံနှင့်ပေါရာဏလေ့ကျင့်ရေး
Google ထုတ်ကုန်အခြားနည်းလမ်း | စိတျအပိုငျး 3
OPUS - "ဒီညအော်ပရာမှာ 2019"
ဘီလျံနာသူဌေးကြီး Rene Benko ကိုသြစတြီးယားမှနိုင်ငံရေး၊
Antenne လောကနှင့်သူ့မိသားစုသည်ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သည်။ သူ့မှာ k ရှိတယ်
in အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်ထင်မြင်ချက်များ, သြစတြီးယား
*** ကြော်အစွန်အဖျား *** ။ ကော်ဖီအကြောင်းပြောနေတာ - ငါတို့ကော်ဖီစာရွက်စာအုပ်သိပြီလား အဆိုပါ ...
၏ Fairtrade သြစတြီးယား
***Rezept-Tipp***. Apropos Kaffee – kennt ihr schon unser Kaffee-Rezeptheft? Dieses Heft enthält neben Hintergrundinformationen zu Kaffee interessante Rezepte für Gerichte, die sich mit fair gehandelten […] ပိုပြီး
၏ Haarmonie Naturfrisör
🌍🌱💇🏼‍ G E W I N N S P I E L 💇🏽‍🌱🌍 Du möchtest dir und deinen Haaren etwas Gutes tun? Dann mach bei […] ပိုပြီး
သင်၏အိမ်တွင်ရေကို 6.000 လူများနှင့်မျှဝေရန်သင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်ပါသလား။
Könnt ihr euch vorstellen das Wasser in eurem Haus mit 6.000 Menschen zu teilen? Für die Menschen im Bezirk Falo in Jeldu ist das Realität. […] ပိုပြီး
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကသင့်ကိုတကယ်ပျော်ရွှင်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပြလယ်သမားရဲ့အငယ်ဆုံးနှစ်ခု ...
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကသင့်ကိုတကယ်ပျော်ရွှင်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စံပြလယ်သမား Asmara ၏အငယ်ဆုံးနှစ်ခုသည်ဆွစ်ဇလန်အသစ်ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ သူသည်မီနူးမှကြိုဆိုသောအပြောင်းအလဲဖြစ်ပြီး [... ] ပိုပြီး
၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 2000
လိပ်ပြာများနှင့်ပျားများသာမကငှက်များသာမကကျက်စားရာနေရာနှင့်အစားအစာအနည်းငယ်သာရရှိသည်။ တစ်နှစ်အတွင်းသူတို့ကိုမည်သို့အိမ်တစ်လုံးပေးမည်နည်း [... ] ပိုပြီး
ကျွန်ုပ်တို့၏တနင်္ဂနွေစကားဝှက်သည်ခေတ္တရပ်နားသည်။ အဲဒီအစား၊ မင်းအတွက်လူသားတစ်စုံကိုလိုချင်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တနင်္ဂနွေစကားဝှက်သည်ခေတ္တရပ်နားသည်။ လူသားထုကိုသင်စိန်ခေါ်လိုသည်။ coming လာမည့်သီတင်းပတ်များအတွင်းတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း [... ] ပိုပြီး
ထို့အပြင် Fanayse ကမ္ဘာကြီးသည်အနာဂတ်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်။ သူမမှာအီးရှိတယ်
ထို့အပြင် Fanayse ကမ္ဘာကြီးသည်အနာဂတ်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းသင်တန်းတစ်ခုတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးသူမအားဝင်ငွေကောင်းစေသည် [... ] ပိုပြီး
အရောင်ဆိုးသောဆံပင်» HAIRMONIE သဘာဝဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း
အကြံပြုချက်ကိုဖတ်ရှုခြင်း your သင်၏ဆံပင်ကိုအရောင်မဲ့စေခြင်း - ထိုအရာသည်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသလော။ ငါတို့နှင့်အတူ! သင်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်လတ်နေသလား။ ထို့နောက် Henna ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ပိုပြီး
ဒီညစာကိုစီစဉ်ပြီးပြီလား လန်းဆန်းစေတဲ့အုန်းသီး - ထုံးကိုထောက်ခံပါတယ်။
ညစာကျွေးပြီးပြီလား လန်းဆန်းစေသောအုန်းသီး - ထုံးဟင်းချိုကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။4လူများအတွက်သင်လိုအပ်သည်မှာ - - 1 cilantro အတုံး၊ ခုတ်ထားသော - 1 Organic Fairtrade ထုံး  မှညှစ်ထုတ်လိုက်သည်။ ပိုပြီး
မင်းစိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာပြပါ - မင်းရဲ့ profile ပုံထဲမှာပါ။
သင်စိတ်ဆိုးနေကြောင်းပြသပါ - သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပုံတွင်လည်း 😠ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရိုဖိုင်းရုပ်ပုံဒီဇိုင်းတစ်ခုတီထွင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုတွင်သင်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည် [... ] ပိုပြီး
အီသီယိုးပီးယားရွာတစ်ရွာသည်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနေပြီး Didiksa ကိုကြိုဆိုသည် - ဗွီဒီယိုနှင့်အတူ
Menschen für Menschen သည်လူသားနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှု၏အခြေခံတန်ဖိုးများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ လူတွေကိုအာရုံစိုက်တယ်။ သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အသီးအသီး။ [ ... ] ပိုပြီး
Didiksa ရွာကလူတွေဟာသူတို့ဒေသမှာကြီးထွားလာတာကိုယုံကြည်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပုံပြင်တွေကိုဘယ်လိုပြောပြလဲ၊ ပိုပြီး
ငါတို့ Nagaya မဂ္ဂဇင်းထဲကအမျိုးသမီးငယ် Birye ကိုမှတ်မိသေးလား။ မင်းတို့ ...
ငါတို့ Nagaya မဂ္ဂဇင်းကအမျိုးသမီးငယ် Birye ကိုမှတ်မိသေးလား။ သူမသည်ကြီးမားသော goiter ခဲ့ရပြီးအပေါ်ခွဲစိတ်ကုသခဲ့သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွင် [... ] ပိုပြီး
ရာသီအလိုက်စျေးဝယ်ခြင်း - ရာသီအလိုက်ဈေးဝယ်ခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
စျေးဝယ်တဲ့အခါရာသီအလိုက်ကိုအာရုံစိုက်ပါသလား။ ☀️နေ့ရက်များတိုလာပြီးဇာတိ Paradeiser သည်လယ်ကွင်းများတွင်လွတ်လပ်လာတော့မည်မဟုတ်။ for [... ] အတွက်ရာသီ ပိုပြီး
ကျွန်ုပ်တို့သည်အီသီယိုးပီးယားသို့ပြန်လာပြီးယနေ့ခေတ်စီမံကိန်းမန်နေဂျာ Gebeyehu နှင့်အလွန်အထူးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ မကြာခင်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အများသုံးရေချိုးခန်း💦 [... ] ပိုပြီး
in အခြားနည်းလမ်းများ & ထင်မြင်ချက်များ
2 ရှယ်ယာ1 မှတ်ချက်9 မဲ
အမျိုးသမီးများ၏တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်များကိုအခွန်နှုန်းထားဖြင့်ကောက်ခံသင့်သလား။ မီဒီယာတွေကလည်းမေးနေတဲ့သြစတြီးယားမှာမေးခွန်းထုတ်စရာပါ။ ထို့ထက် ပို၍ ORF သည်အစီရင်ခံစာတစ်ခုကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။ ပိုပြီး
ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြည့်အ ၀ ယုံကြည်စိတ်ချရသောသဘာဝဆံပင်အလှပြုပြင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြည့်အ ၀ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသောသဘာဝဆံပင်ညှပ်သမားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး 30 နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်သည်စစ်မှန်သော၊ သဘာဝနှင့်မူရင်းအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပိုပြီး
ဒါက the ည့်သည်တရားမျှတသော 2019 ပဲ! ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြ ...
ဒါက the ည့်သည်တရားမျှတသော 2019 ပဲ! အီသီယိုးပီးယားမှ FAIRTRADE ကော်ဖီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများနှင့် [... ] ၏မြောက်မြားစွာသော Tekle Tadesse Gelgele လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးဝမ်းမြောက်မိသည်။ ပိုပြီး
မမေ့ပါနှင့် - သင်၏ဒီမိုကရေစီဖြစ်နိုင်ခြေကိုအသုံးချပြီး K ကိုလက်မှတ်ထိုးပါ။
မမေ့ပါနှင့် - သင်၏ဒီမိုကရေစီဖြစ်နိုင်ခြေကို အသုံးပြု၍ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းတောင်းဆိုချက်ကိုလက်မှတ်ထိုးပါ။ #wirsindsauer #notmyklimaplan #climateprogram ယခုရင်းမြစ် ပိုပြီး
ယနေ့ 38 မတိုင်မီက Karlheinz Böhmသည် Menschen für Mensch အဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 38 မတိုင်မီတွင် Karlheinz Böhmသည် Menschen für Menschen အဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးသန်းပေါင်းများစွာသောသူများအတွက် "Self- help to help" အတွက်အုတ်မြစ်ချခဲ့သည်။ ပိုပြီး
ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းကိုအရေးမယူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒေါသထွက်ပါတယ်။ too မင်းလည်းစိတ်ဆိုးနေတာလား။ ထို့နောက်ပြပါ။ [... ] ၏ပုံကိုရိုက်ပါ။ ပိုပြီး
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း "ကောင်းသောဆံပင်နေ့" ဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Herbanima ၏ #Haargel က ...
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း "ကောင်းသောဆံပင်နေ့" ဖြစ်နိုင်သည်။ Her ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ #Harbanima ofHarargel ကတောက်ပနေတဲ့အပြင်ဆံပင်ကောက်ကောက်တွေကိုပြောင်မြောက်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ [... ] အတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့အထောက်အမ ပိုပြီး
FAIRTRADE ကိုသင်ကောင်းကောင်းသိပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာတစ်ခု၏စိတ်ကူးကိုစိတ်အားထက်သန်စေလိုပါသလား။ ထိုအခါသင်သည်ငါတို့နှင့်အတိအကျမှန်ကန် - လျှောက်ထား [... ] ပိုပြီး
တစ်ပတ်အတွင်းကောင်းသောအစပြုရန်သင့်အား wish ရင်းမြစ်ပေးပါ ပိုပြီး
Attac မဂ္ဂဇင်း 2019 /2သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းဝင်များ၏စာတိုက်ပုံးများမှ ...
Attac မဂ္ဂဇင်း 2019 /2သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းဝင်များနှင့်အလှူရှင်များ၏စာတိုက်ပုံးများမှပုံနှိပ်ခြင်းမှလတ်ဆတ်သည်။ ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူအခြားအမှုအရာတို့တွင်: #Klimagerechtigkeit, #Mercosur, #Konzerne နှင့် #Treuergerechtigkeit အဖြစ်စီးပွားရေး #Transform နှင့် [... ] ပိုပြီး
ယနေ့ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသိပ္ပံနေ့၌မင်းတို့ထံမှကြားလိုပါသည်။ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာဒီပလိုမာသင်တန်းသုံးခုအနက်မှကျောင်းသားမည်မျှပြီးမြောက်ခဲ့ပြီးပြီနည်း။ ပိုပြီး
ကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံဖြင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သာမကသင်၏ဆံပင်ကိုပါအကျိုးပြုသည်။ pecially အထူးသဖြင့်အအေးပိုင်းလများတွင်သင်သည်►ရေအလုံအလောက်ရရှိရန် [... ] ပိုပြီး
#wirsindsauer - ဗွီဒီယိုနှင့်အတူ
#We အရမ်းစိုးရိမ်နေကြတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သြစတြီးယားနိုင်ငံရေးမှာရာသီဥတုအကျပ်အတည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတဲ့အချိန်ဇယားတခုကိုဖော်ပြမထားလို့ပဲ။ 😠 # သင်မဟုတ်ပါMyKlimaplan? ထို့နောက်သင်၏ပုံတစ်ပုံကိုတင်ပါ။ ပိုပြီး
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ နေ့တွေပိုတိုလာပြီးအပူချိန်တွေအေးလာတဲ့အခါများစွာသောလူတွေအတွက်အအေးမိလာတယ် - ကံမကောင်းတာကငါတို့ရုံးခန်းထဲမှာတော့ ... [... ] ပိုပြီး
3 ။ ဖိုရမ် "ကောင်းမွန်သောငွေ - ထပ်တိုးတန်ဖိုးဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း"
၏ Raiffeisenbank Gunskirchen ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စင်တာ
ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်တစ်ခုခုသို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းပြန်လာခဲ့ပါသလား။ အဲဒါတောင်ဖြစ်နိုင်မလား။ ဟုတ်တယ်၊3ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေဆို [ ... ] ပိုပြီး
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် - eco-test သည်လူသိများသောနှုတ်ခမ်းမွှေးကိုသတိပေးသည်။ သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ချနိုင်သည် - facile LIP CARE သည်တွင်းထွက်ဆီများနှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောပါဝင်ပစ္စည်းများလုံးဝမပါဝင်ပါ။ သဘာဝကသာ [... ] ပိုပြီး
Oromia ကော်ဖီစိုက်တောင်သူများသမ ၀ ါယမကော်ဖီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့် Tekle Tadesse Gelgele ...
beautiful iop 😍 ia အီသီယိုးပီးယားမှ Oromia ကော်ဖီစိုက်သမသမဂ္ဂကော်ဖီစိုက်ပျိုးသူ Tekle Tadesse Gelgele သည်Austriaစတြီးယားသို့ကျွန်ုပ်တို့လာရောက်လည်ပတ်ပြီးသူ၏အတွေ့အကြုံများအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ပိုပြီး
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူ Dominik Linhard မှ ...
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူ Dominik Linhard သည် Augarten City Farm တွင်အကျိုးရှိသောသက်ရှိများဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ there ထိုတွင်ရှိခဲ့သောသဘာဝရှိသူများအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ [ ... ] ပိုပြီး
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ Vattenfall နှင့် RWE မှ ...
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သော Vattenfall နှင့် RWE တို့ကလည်းသူတို့ကနယ်သာလန်ကိုတရားစွဲဆိုလိုကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းပြချက်သည် [... ] မှထွက်ခွာရန်ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုပြီး
အိန္ဒိယနွေရာသီ။ ဆောင်း ဦး ရာသီ၏အရောင်များအားလုံးနှင့်အတူပြည့်စုံသောရာသီဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယနွေရာသီ။ 🍂🍁ဆောင်း ဦး ရာသီသည်၎င်း၏အရောင်များအားလုံးနှင့်အတူပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်အတွက်အကောင်းဆုံးရာသီဖြစ်သည်။ Herbanima ၏ #plant အရောင်များကိုသင်သိနှင့်ပြီလား။ သူတို့ [... ] ပိုပြီး
ကော်ဖီသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တစ်နှစ်နှင့် 186 လီတာပါဝင်သည်။
ကော်ဖီသည်တစ်နှစ်လျှင်သြစတြီးယားနိုင်ငံ၌လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် 186 လီတာနှင့်အတူရေပန်းစားသောသောက်သုံးရေဖြစ်သည်။ ဂျာမနီတွင်၊ 163 လီတာနှင့်အတူကော်ဖီသုံးစွဲမှုမှာ [... ] ပင်ဖြစ်သည် ပိုပြီး
ကျဆုံးခြင်းလေထဲတွင် .. ဆံပင်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကကျဆုံးခြင်းကိုချစ်။ ထိုထက်ကားချစ်လှစွာသော ...
ကျဆုံးခြင်းလေထဲတွင် .. ဆံပင်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကကျဆုံးခြင်းကိုချစ်။ ထို့ထက်ကားသူ [... ] ၏လှပသောအရောင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ချစ်ကြသည်။ ပိုပြီး
Biriye သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအထင်ရှားဆုံးအမျိုးသမီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမသည်အဖွား၊ အစ်မနှင့်အတူနေထိုင်သည်။ ပိုပြီး